Bilaogy Iraniana: Fikambanan’ny Bilaogera Miozolomana, Mpiambina Revolisionera Manana 20 tapitrisa dolara sy Firaisankina Amin’ny Fiarovana Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Bilaogy Iraniana: Fikambanan'ny Bilaogera Miozolomana, Mpiambina Revolisionera Manana 20 tapitrisa dolara sy Firaisankina Amin'ny Fiarovana Vehivavy
Voadika ny 06 Novambra 2017 7:27 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny Novambra 2005 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tafatsangana ny fikambanana vaovao ho an'ny bilaogera Iraniana: ny Fikambanan'ny Bilaogera Miozolomana.
Talohan'ity fikambanana vaovao ity, misy maromaro vitsivitsy no efa navitrika toy ny Penlog izay miezaka miaro ny fahalalaham-pitenenana ary manana mpikambana 200 eo ho eo.
Saingy inona no tanjon'ity fikambanana vaovao ity? Araka ny filazan'i Pasdar (midika hoe mpiambina), ny bilaogera milaza ny tenany ho latsa-pitia amin'ny mpiambina revolisionera, ity fikambanana ity no valin-teny ho an'ireo bilaogera sy bilaogy laika. Ny mpikambana rehetra ao amin'ny fikambanana dia tsy maintsy Silamo manaja ny Repoblika Islamika sy ny teôkrasia Iraniana. Mazava tsara fa miezaka mifandamina ho vondrona mifototra amin'ny foto-keviny ireo bilaogera. Hoy i Pasdar:
“Mandray ny firenenay toy ny anay izahay ary mirehareha amin'izany.”
Bilaogera marobe no niresaka momba ny kandidà Ahmadinejad ho Minisitry ny solika. Nilaza Atoa Mahsouli, mpiambina revolisionera teo aloha, fa maherin'ny 20 tapitrisa dolara ny harenany. Paiz, rohy amin'ny teny Persiana, bilaogera monina any Holandy, nilaza fa tsy misy olona ao amin'ny Parlemanta Iraniana nanontany azy hoe ahoana no nahazoany izany vola rehetra izany tao anatin'ny fotoana fohy. FMSokhan, rohy amin'ny teny Persiana, bilaogera sady mpanao gazety Iraniana kosa namoaka ny sarin'ny tranon'ny Atoa Mahsouli ary nilaza hoe, jereo ny viliaben-janabolana ao amin'ny tafon-tranony. Izay voaràra ho antsika dia avela malalaka ho an'ny sasany … Taorian'ny fanerena nataon'ireo solombavambahoaka sasany, nanaisotra ny firotsahany hofidiana i Ahmadinejad.
Bilaogy maromaro no niseho tamin'ny 11 Novambra tamin'ny anarana Iranian Feminist Tribune, rohy amin'ny teny persiana izay efa voasivana herinandro lasa izay. Bilaogy 20 mahery no nandray anjara tamin'ity hetsika firaisankina ity, anisan'izany ny Sarzamine aftab.